आखिर विमानको रङ किन सेतो हुन्छ ? : विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
आखिर विमानको रङ किन सेतो हुन्छ ? : विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य
सफल न्युज द्वारा २०७७ आश्विन २९ गते बिहीबार १६:३४ मा प्रकाशित
हामीमध्ये केहीले विमानमा यात्रा गरेका छौं । तर विमानसँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबारे सायद तपाईंलाई थाहा छैन । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः
आखिर विमानको रङ सेतो नै किन हुन्छ ?
सेतो रङ लगाउँदा विमानको बडीमा आएको कुनै पनि खराबी जस्तै चिरा परेको वा तेल चुहिएको सजिलै देख्न सकिन्छ । साथै, सेतो रङले तातोलाई सजिलै परावर्तन गर्न सक्छ जसका कारण ३० हजार फिटको उचाईमा पनि विमान चिसो हुने गर्दछ ।
विमानको भर्याङको मुनी किन बनेको हुन्छ सानो प्वाल ?
विमानको भर्याङमा तीन तह हुन्छ । एक तह बाहिरतर्फ, एक बीचमा र अर्को भित्रतर्फ । यसमा बीचको तहमा तपाईं सानो प्वाल देख्न सक्नुहुन्छ । वास्तवमा बीचको तहमा भएको प्वालले क्याबिनको प्रेशर नियन्त्रण गर्दछ । यदि प्रेशरका कारण झ्याल फुटेपनि सबैभन्दा पहिले यसको बाहिरी तह फुट्नेछ । त्यति बेलासम्म चालकले पनि विमानलाई तलसम्म लैजान सक्छ ।
किन हुन्छ विमानको झ्याल गोलो वा घुमाउरो ?
वास्तवमा, सुरुवाती अवस्थामा विमानको झ्याल चार कुनाको हुन्थ्यो । प्रेशरका कारण झ्यालको सिसा टुट्ने गर्दथ्यो । समयसँगै विमानको आकार र सुरक्षा दायरामा पनि परिवर्तन ल्याइयो । विमानको सुरक्षाका लागि वैज्ञानिकले पनि निकै सजिलो तरिका अपनाए । उनीहरुले विमानको झ्याललाई गोलो वा घुमाउरो बनाए ता कि यसमा पर्ने प्रेसर बाँडियोस् जसका कारण यो टुट्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
किन सानो हुन्छ विमानको झ्याल ?
उचाईमा उड्दा विमान बाहिर र भित्रको प्रेशरमा निकै अन्तर हुन्छ । यदि विमानको झ्याल ठूलो भए त्यसको सिसा टुट्ने सम्भावना बढि हुन्छ । तर तपाईं सोचिरहनुभएको होला कि ककपिटको झ्याल ठूलो र चार कुना किन हुन्छ ? वास्तवमा, चालकले बाहिरको दृश्य स्पष्ट रुपमा देखून् भन्नका लागि ककपिटको झ्याल ठूलो बनाइएको हुन्छ । यसमा प्रयोग गरिएका सिसा अत्यधिक बलियो र धेरै नै महँगो हुने गर्दछ ।
ल्याण्डिङ र टेकअफका बेला किन खोलिन्छ झ्यालको सटर ?
ल्याण्डिङ र टेकअफका बेला एयर होस्टेजले तपाईंलाई झ्यालको सटर उठाउन आग्रह गर्दछन् । वास्तवमा यसको पछाडि सुरक्षा कारण हुन्छ । यात्रुहरु विमानको सुरक्षाको विषयमा धेरै सजग हुन्छन् । यस्ता थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् जसमा यात्रुले झ्यालबाट देखेर क्रुलाई प्लेनको खराबी बारे जानकारी दिएका थिए । सटर खुल्ला हुँदा विमानमा आएका कुनै प्रकारको खराबीलाई तुरुन्त थाहा पाउन सकिन्छ ।
धोका दिएको शंकामा प्रेमिकाले प्रेमीको गुप्तांग काटेर ट्वाइलेटमा बगाइदिइन्
मान्छे मार्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभव गर्न साथीका बुवाको हत्या
स्काइडाइभिङमा आकाशमै यौनसम्बन्ध राख्न थाले तर प्यारासुट खोल्न…
धोका दिएको शंकामा प्रेमिकाले प्रेमीको गुप्तांग काटेर ट्वाइलेटमा…
सौतासँग गएको रिसमा श्रीमतीले टोकेर लिंग चुँडाइदिइन्, डाक्टरले फेरि…